Home » Toerana fitsangatsanganana » St. Kitts & Nevis dia mirakitra fitomboana tarehimarika indroa mandritra ny roa volana voalohany amin'ny 2019
Ny fangatahana ho an'i St. Kitts & Nevis ho toeran-kaleha voalohany ho an'ny mpandeha dia mitombo hatrany, miaraka amin'ireo tonga an-habakabaka mandritra ny roa volana voalohany amin'ity taona ity dia nampisondrotra 15.3% ny fitomboana isan-taona raha ampitahaina amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny 2018 . Mbola tsara kokoa ny valiny avy any Amerika Avaratra, ny tsena loharanom-pahalalana lehibe indrindra ao amin'ilay toerana, izay misoratra anarana amin'ny 19.3% ny fiakarana an-habakabaka isan-taona amin'ny volana Janoary sy Febroary 2019 raha ampitahaina amin'ireo volana ireo ihany tamin'ny taona 2018. Ity dia mitohy ny fitomboan'ny fiaramanidina avy amin'ny vavahady lehibe amin'ny taona 2018, izay nitombo mihoatra ny taona 2017 tamin'ny rafitra 9.3% manerantany ary nahatratra 153,364 XNUMX ny fahatongavan'ireo mpandeha an'habakabaka nandritra ny taona iray, isa avo indrindra voarakitra tamin'ny tantaran'ny toerana haleha.
"Faly be aho mahita ny fiakaran'ny vidin'ny mpandeha an'habakabaka eto amin'ny federasiona ho an'ny taona 2018 mitohy amin'ny vanim-potoana tampon'ny 2019," hoy ny Hon. Lindsay FP Grant, minisitry ny fizahan-tany ho an'i St. Kitts & Nevis. "Ireo isa ireo dia manondro mazava fa mahazo vahana amin'ny fanatratrarana ny tanjon'ireo mpitsidika miisa 150,000 mandritra ny taona vitsivitsy."
"Nampitomboinay ny ezaka ara-barotra tamin'ny telovolana fahefatra tamin'ny taon-dasa mba hanohanana ny serivisy fanampiny amin'ny vanim-potoana farany ary asehon'ireto isa ireto fa nahavita vokatra tena mahomby izahay," hoy i Racquel Brown, CEO an'ny St. Kitts Tourism Authority. "Miaraka amin'ireo fahatongavan'ny sidina an-habakabaka marobe voasoratra ho an'ny 2018 sy ny zava-bita tamin'ny volana martsa sy jona teo akaikin'ny fitomboana 30% tao anatin'ny volana mitovy tamin'ny 2017, ny fitomboana lehibe norefesina hatreto tamin'ny taona 2019 dia nampiseho ny fitomboan'ny tinady ho an'i St. Kitts ho toerana fitsangatsanganana irina, indrindra avy any Amerika Avaratra sy amin'ireo hetsika lehibe toa ny St. Kitts Music Festival. Mbola hampiasa an'ity paikady ara-barotra mahomby ity izahay eo am-piezahana hanatratra ny tanjonay, vahiny vahiny 150,000 2021 amin'ny XNUMX avy amin'ny tsenambaratoky voalohany eto Etazonia, Kanada, UK ary Karaiba. ”
Ny paikadin'i St. Kitts dia mitazona fifantohana manokana amin'ny fanatratrarana olona izay mifaninana amin'ny angon-drakitra Geo-demografika an'ny mpitsidika kendreny amin'ny tsena vavahady lehibe hanohanana ny fidiran'ny rivotra mandritra ny taona ary koa ny hetsika nosy marquee ao anatin'izany ny St. Kitts Music Festival . Tamin'ny telovolana fahefatra 2018, dokam-barotra amin'ny fahitalavitra, pirinty ary fahitalavitra fanampiny ampiarahina amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe mba hifandraisana tolotra manokana sy hanentanana ny marika any amin'ireo tanànan'ny Amerikana Avaratra voafantina sy manodidina ny fampielezan-kevitra mandrindra ny fahatongavana ho an'ny vanim-potoana fara-tampony 2018-2019. Ny minisiteran'ny fizahantany sy ny manam-pahefana fizahan-tany any St. Kitts dia miasa akaiky ihany koa amin'ireo kaompaniam-pitaterana an-tserasera mba hananganana tetezana rivotra mankany / amin'ny vavahady kendrena mba hampitomboana ny serivisy amin'ny fomba maharitra ary hahatonga ny nosy ho mora azo hatrany amin'ny rivotra.
St. Kitts & Nevis dia nandray ny sidina tsy miato sabotsy avy any Minneapolis nanomboka ny 22 desambra 2018 ary hatramin'ny 20 aprily 2019. Ho fanampin'izany, avy amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Newark Liberty any New Jersey, ny sidina dia mahazo sidina tsy miato alarobia nanomboka ny volana janoary 9, 2019 ary miasa hatramin'ny 6 martsa 2019 mba hamenoana ny sidina sabotsy tsy misy fitsaharana. Manantena mialoha ny fahavaratra, sidina vaovao tsy miato sabotsy avy any Dallas manomboka ny 25 May 2019 ary miasa hatramin'ny 17 Aogositra 2019 dia manokatra vavahady vaovao misy fifandraisana mora avy any Houston sy ny fanjakana andrefan'i Etazonia.
Momba an'i St. Kitts:
Ny hatsaran-tarehy voajanahary mahamamo, ny lanitra feno masoandro, ny rano mafana ary ny morontsiraka fasika dia mitambatra mba hahatonga an'i St. Kitts ho iray amin'ireo toerana manintona indrindra any Karaiba. Any amin'ny Nosy avaratry Leeward dia manome vokatra fizahan-tany isan-karazany novolavolaina tamin'ny hatsaran-tarehy voajanahary, lova ara-kolontsaina ary tantara manan-karena. Ny mahaliana isan-karazany an'ny nosy dia ny fitsangatsangana amin'ny ala tropikaly, mitaingina ny lalamby mahafinaritra izay mampifandray ireo fambolena siramamy teo amin'ny nosy, fitsidihana ny orinasa Caribbeanelle Batik, ary fitsidihana ny Brimstone Hill Fortress National Park, izay UNESCO World Heritage Site. Anisan'ireo fialamboly fialantsasatra nentim-paharazana kokoa ny fanatanjahan-tena ao anaty rano toy ny fitsangantsanganana any Catamaran, golf, fiantsenana, tenisy, fisakafoanana, filalaovana ao amin'ny casino manokana an'i St. Kitts na miala sasatra amoron-dranomasina fotsiny.